Izu nke June 6 - BGR - TELES Relay
Karịa ihe ọ bụla enwere m nsogbu Portlandia na-ahapụ Netflix n'izu a. O nwere ike ọ gaghị enweta nlebara anya dị ka enyi ma ọ bụ Seinfeld ma ọ bụ Ọfịs, ma ọ bụ ihe ọchị dị ka nke ọ bụla n’ime ihe ngosi ndị a ma ọ bụ nnukwu ihe ngosi iji nwee n’okirikiri oge obula.
Ọ dabara nke ọma, e nwere ụfọdụ ezigbo ọdịnaya iji dochie ya, gụnyere ọtụtụ ngosipụta nke Lupine, nke mere ka enwe mmetụta mgbe ọ malitere na Jenụwarị. Enwekwara ụfọdụ ihe nkiri ọhụụ ọhụrụ na-atọ ụtọ na-apụta n’izu a, gụnyere onye na-atọ ụtọ gbasara ndị na-enweghị ike ihi ụra akpọrọ Teta! (nke kpakpando Gina Rodriguez), na ihe nkiri animated akpọrọ Iche dragon.
Oge kacha mma	Ndị na-azụ ahịa na-agba agba Amazon iji nweta plọg ndị nwere ọmarịcha ihe maka $ 4,37 ọ bụla!	Ndepụta nke ọnụahịa:24,99 $	Ahịa:17,49 $	Ị chekwaa:$ 7,50 (30%)	 Dị na Amazon, BGR nwere ike ịnweta ọrụ	Zụrụ ugbu a	Dị na Amazon BGR nwere ike ịnata ọrụ
Mọnde June 7
Teta! - NETFLIX FILM
Mgbe ihe omume zuru ụwa ọnụ mebiri ikike mmadụ nwere ihi ụra, onye bụbu onye agha na-alụ ọgụ na-alụ ọgụ iji zọpụta ezinụlọ ya ka ọha mmadụ na uche ya banye n'ọgba aghara.
Ọhụrụ, e ghere eghe ma sie ike - NETFLIX usoro
N'ịbụ onye nwere mmasị maka nri na maka ụfọdụ ihe ọchị, onye na-enyocha Daym Drops na-aga ebe dị ọkụ gafee America maka nri kachasị mma.
LA's finest: LA's Finest: Oge 2
Oke ohia di egwu - NETFLIX FILM
Iji gbanahụ alụmdi na nwunye a haziri ahazi, otu nwanyị gbagara n'ime omimi nke oke ọhịa Mayan, ebe ọzara jikọtara mmadụ na ike karịrị nke mmadụ.
Tọzdee 10 June
Ezigbo ụlọ 2
Ellmụnna nwanyị Camellia
Locombianos - NETFLIX usoro
Anọ ndị Colombia na-eme ihe ọchị na ndị rụrụ arụ na-arụ n'ihu ndị na-agụ akwụkwọ akụkọ na-agụ agụụ maka akụkọ ha.
Fraịdee 11 June
Hụnanya (ft. Alụmdi na Nwunye na Alụkwaghịm): Season 2 - NETFLIX usoro
Ọ bụ oge ọzọ nke gbagọrọ agbagọ na-enwe nsogbu alụm di na nwunye nke ụmụ nwanyị atọ na-arụ ọrụ na redio.
Lupine: Nkebi nke 2 - NETFLIX usoro
Hubert na ndị agha ya chụrụ ya ọsọ, Assane na-achọ ịchọta Raoul ma nweta onye ọhụụ ọhụụ ka ọ na-ewepụta nnukwu atụmatụ iji kpughee mpụ Hubert.
Nwa nwanyi Skater - NETFLIX FILM
N'ime ihe nkiri na-akpali akpali nke Skater Girl, nwa agbọghọ dị afọ iri na ụma si n'ime ime obodo India ga-alụrịrị ọgụ site na oke na mkpa iji mezuo nrọ ya nke ịbụ skater na ịsọ mpi n'ọsọ mba.
osisi - NETFLIX ANIME
Nịm na Manila ebe akụkọ ifo sitere na akụkọ ọdịnala Filipino zoo n'etiti ụmụ mmadụ, Alexandra Trese chere ụwa mpụ ihu.
Iche dragon - NETFLIX EZIN .LỌ
Ọ na-achọsi ike ka ya na ezigbo enyi ya bụrụ nwata, Din dị afọ iri na ụma na-ezute dragon mara mma nke na-enye ya ngosi anwansi.
Sundaybọchị Sunday 6 June
Chọta Bobby Fischer
Anyị ga-abịa n'izu na-abịa site na nchịkọta ọzọ nke ihe ngosi ọhụrụ niile, ihe nkiri, na ọpụrụiche na-abịa na-aga Netflix. Ka ọ dịgodị, lelee ihe niile na-abịa na-aga Netflix na June, karia ka wepụta oge ịtọhapụ maka ihe nkiri Netflix na mbụ niile.
Oge kacha mma	 Ndị na-azụ ahịa na-agba agba Amazon iji nweta plọg ndị nwere ọmarịcha ihe maka $ 4,37 ọ bụla!	Ndepụta nke ọnụahịa:24,99 $	Ahịa:17,49 $	Ị chekwaa:$ 7,50 (30%)	 Dị na Amazon, BGR nwere ike ịnweta ọrụ	Zụrụ ugbu a	Dị na Amazon BGR nwere ike ịnata ọrụ
Emepụtara K-pop ọhụrụ a na AI na ...
Edemede a pụtara na mbụ https://bgr.com/entertainment/netflix-new-releases-june-6-2021-shows-movies-5929562/
Gosi mkpirisi mkpirisi igodo Windows 10 na PowerToys ọhụrụ - Ndụmọdụ